Waini 3.0 RC5 ikozvino yakagadzirira kuyedza | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani Regedza Musarudzo 5 yeWine 3.0 Yakatoburitswa kare, asi kusiyana nemamwe maRCs chokwadi ndechekuti kwave kuri kusimukira kwakadzikama maererano nemabug fixes akawanikwa munzvimbo inozivikanwa yekudyidzana kwenzvimbo dzeUnix / Linux kuti vakwanise kuisa yemuno Windows operating system software mavari, uyezve zvakare mune iyi yechitatu vhezheni iwe unogona zvakare kusarudza kuisa izvi native Windows maapplication zvakare paAroid, Saka wako "Andy" anozogona kumhanyisa software yakawanda, achibatsirwa kubva pane izvo kusvika parizvino zvakangobata BSD, Linux, macOS, Solaris ... uye nekutenda kuzvinhu zvitsva zvakaitwa nevarume vechirongwa sechinhu chitsva.
ari kukanganisa kuri kuwedzera kushomaIzvi zvakajairika sezvo vhezheni itsva yeRCs yaburitswa, nekuti kuvandudza kuchakurumidza kuva chando chose kuvhura vhezheni yekupedzisira yeWine 3.0 yatichaona munguva pfupi iri kutevera. Muchokwadi, kuiswa kwekuvandudzwa kwekodhi kwatomiswa uye kwave kungove kwekudzokorora uye kugadzirisa kwembugs nematambudziko anogona kuwanikwa mune iyi vhezheni itsva. Iwe unogona kubatsira kana iwe ukakanda iyo RC5 projekiti uye nekuiisa kuti uedze kana paine zvisizvo zvitsva zvekuita.
Asi zvinoita sekunge waini 3.0 RC5 iri chaizvo yakasimba uye yakasimbae saka iro basa rakakura rakaitwa nevagadziri rakabhadhara uye ivo vanozove nenguva yakawanda yekutarisa chete kugadzikana, chimwe chinhu chakanakisa kuwana zvinopfuura zvine hunhu software. Tichanyanya kuona Wine 3.0 Yekupedzisira kupera kwaNdira, saka inhau dzakanaka kwazvo kune avo vanoteedzera chirongwa ichi zvakanyanya uye vanofanirwa kutarisa nhau dzese dzainotiunzira uye dzatakatotaura nezvadzo muLxA.
Kune avo vari kushamisika kuti zvikanganiso zvipi zvakagadziriswa muWine 3.0 RC5 zvine chekuita neRC4 yatakaona mazuva mashoma apfuura taura izvozvo 9 bugs zvakagadziriswa. Imwe yacho yaive nehukama neSlingplayer 2.0 yekumisikidza wizard iyo yakarova uye ikarova Wine, mamwe matambudziko maviri akawanikwa mu regedit, bhagi rakakanganisa mashandiro, CHM viewer yekufambisa zvinhu, zvikanganiso mukuisirwa kwakawanda kweMS Office 2010 na2013, Eclipse yakarova pa kutanga, sezvakaita Alice: Kupenga Kunodzoka, uye pakupedzisira chishandiso cheKudzivirirwaID chakarova sevha yeWine.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Waini 3.0 RC5 ikozvino yakagadzirira kuyedza
Juanjo Salvador akadaro
Zvinoita kuti ndinzwe kusaziva kufunga kuti nhanho dzangu dzekutanga neWine dzaive mushanduro 1.16, uye tarisa izvozvi ...
Pindura Juanjo Salvador
Waini muenzaniso wekusiyana-siyana kweGNU linux iyo inokwanisa kugadzirisa uye kunyangwe kuitisa mafomu kubva kune mamwe masisitimu anoshanda, ikozvino zvakare android kuwedzera kune windows, ichokwadi kuti haazi ese windows software anogona kumhanya nenzira kwayo asi mamwe mapurogiramu anogona uye izvi zvinobatsira vashandisi kuve vakasununguka zvishoma kuti vakwanise kumhanyisa Windows application newaini iyo yavasina kuwana chinotsiva icho, kana kuti havavatenderi kuti vaishandise, asi vasingafanire kushandisa iyo yese Windows.
Makore apfuura, chii chakandimisa zvakanyanya pakushandisa Linux seiyo OS hombe kwaive kushomeka kwemamwe mafomu andaishandisa kazhinji uye anga asina kukwana kuzere muLinux, asi izvo zvakatora nguva yakareba, vangangoita vese vane imwe nzira uye zvese ini handiwane zvakaenzana zvinoshanda. Ndinozvitanga neWine ine kugadzikana kunoshamisa. Iyo chete yekudzikira inogona kunge iri mitambo asi ini ndakavewo nekumwe kushamisika kumhanyisa mitambo yazvino kwazvo pasina matambudziko. Ngarirambe richivandudza kwemakore mazhinji!
Eh, ini ndinofunga ivo havana kunzwisisa izvo zvazviri kwenguva refu ...
Waini 3.0 inofanirwa kubvumidza kumhanya maWindows maapplication paApple, kwete maapplication eApple paLinux / BSD / macOS
Mumwe munhu akatenderedza pano akanwa waini yakawanda kupfuura zvakafanira ...
Aaah. Iye murume mudiki sei uyu "Isaac" akanyarara achigadzirisa posvo yake uye kuita sekuti hapana chaitika. Panzvimbo pekubvuma kuti iwe wakanganisa uye zvirinani kuwedzera * ZVAKAITWA kana * ZVAKADZIDZWA kumusoro wenyaya yako post.
Zvisinei, ... zvataurwa pamberi pangu (Patricio) na "Jesu" vanozvitaurira vega: Izvo zvavanotaura hazvina hukama nezviri kuitika zvemushure hahaha
Kutanga, hatisi kuisa ZVINOGONESESWA kana ZVAKAITWA kunze kwekunge zvemukati zvawedzerwa kune positi ...
Chechipiri, pamwe ndiyo imwe yemakanganiso makuru, uye ini ndinoedza kudzidza kubva kwavari. Ndosaka ndiri kushoma pamurume? Zvakanaka, pamwe ini ndiri mudiki pane murume ... asi ini ndinofunga kuti munhu kukanganisa.
Chechitatu, kana ndawana maburi ndinoedza kupindura zvakataurwa (ichokwadi kuti ini handipindure dzese nekuda kwekushaya nguva kana nekuti handina kudziona). Uye kana iwe ukafamba pakati peblog uchaona kuti kana chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka ini ndinowanzo kutenda iye anondiudza uye ini ndinozvigadzirisa. Haizove nguva yekutanga.
Chechina, pandinoverenga mamwe mablog uye ndikaona zvikanganiso, ndinoedza kuataura asi ndisingaremekedze, sezvo ndichiziva kuti tese tinokanganisa ...
Kwazisai uye ndinokutendai nekuzivisa iko kukanganisa kwekushandura.
PS: Ini ndichaedza kutora imwe testosterone yekuwedzera
Ndinobvuma kuti ndanga ndakanganisa, ndakaburitsa hasha dzakaburitswa nematauriro aJesu mauri.
Zvakanaka sei kuti iwe wakatsunga kuvandudza uye kuti unobvuma kuti iwe unokanganisa (kune avo vasingadaro).
Ruregerero rwangu rwechokwadi
Hapana kana nguva yandakambotaura pamusoro pechinhu chero chipi zvacho nezve posvo yaIsaka uye handina kana moyo wekuti akazvitora sezvakanaka
Ndiri kuenda kuyedza iyo "Waini 3.0 inobvumidza kumhanya maWindows maapplication paApple, kwete maapplication eApple paLinux / BSD / MacOs" nekuti ndiyo nhau yekutanga yandinayo ...
Ndinotambira ruregerero. Uye ndatenda!
Mumwe munhu anogona kundiudza maitiro ekuisa Waini pane Android. Ndatenda
KUNYANYA Kupunzika uye Specter: zvese zvaunoda kuti uzive nezve izvi zvinokuvadzwa (ZVAKAITWA)